I-Analog Tire Gauges Factory, ababoneleli |China Analog iTire iiGauges Abavelisi
I-Bayonet Inflator Gauge
• Igeyiji yokulinganisa i-inflator yebhayonethi esebenza ngobhedu iya kubonelela ngenkonzo ethembekileyo ngeminyaka
• Umkhono okhuselayo phezu kwetyhubhu yokucofa ukuze ukhuseleke, uyamelana negaraji yasekhaya okanye ukusetyenziswa kweevenkile zorhwebo.
• Igeyiji ye-bayonet inflator inegeyiji eqinileyo yebrass elinganiswe nge-10 – 120 PSI kwi-2 PSI increments.
• Igeyiji ye-bayonet inflator yakhiwe ngomzimba onzima owenzelwe ubomi obude kunye nokuqina.
• Max 300 PSI hybrid hose rubber, 1/4” NPT okanye BSP air inlet
I-Bayonet Tire Inflator
• I-Lever action trigger kunye nokwakhiwa kwe-heavy-duty-duty, inikezela ubomi benkonzo ende nangona kusetyenziswa rhoqo
• Gqibezela ngebha yesalathisi sobhedu ukuze ufundeke lula
• Iquka i-hose ye-intshi ye-12 kunye noluhlu loxinzelelo olunika i-10-120 PSI (2 lb increments)
• I-Clip-on air chuck kumsebenzi wesandla esinye
I-Inflator yeTire enzima eneGauji
● Ukuchaneka kwenzelwe ukusetyenziswa kwimizi-mveliso ukunika ubuninzi boxinzelelo lwenqwelomoya ukuya kuthi ga kwi-150 PSI
● Ukufundwa kwegeji yomgca kwi-PSI kunye nokunyuka kwe-2psi, kunokwenziwa ngokwezifiso kwiBar, i-Kpa njl.
● Umzimba oqinileyo weAluminiyam onesixhobo sokusebenza sentsimbi kunye nefuthe elifunxa ibhampa
● Isixhobo ngasinye sokuchaneka kwetayara esinzima esinegeyiji siyavavanywa ukusebenza size silungelelaniswe kumgangatho wamazwe ngamazwe wokuchaneka: ANSI B40.1 iBakala B (2%) ne-EN12645: 2014
● Isingenisi somoya – 1/4 NPT okanye i-BSP yabasetyhini
● Uluhlu loxinzelelo lomoya: 0 - 150 PSI / 0 - 10 Bar
● Uyilo oludityanisiweyo lwenza kube lula ukuyigcina
● Ilungele iindibano zocweyo, iindawo zamatayara kunye neendawo ezingaphambili zegaraji
● Ifestile enkulu yokujonga isikhulisa-mali inika indawo enkulu yokujonga
● Ubunzima obulula bunika ubunzima obuncinci bomsebenzi kwaye kulula ukusetyenziswa ngokuphindaphindiweyo
● Isixhobo sokufaka umoya kwitayara esinzima esinegeyiji yiprofayili yomgca omncinci, kulula ukuyisebenzisa kwaye ayinokonakala kancinci xa iwisiwe.
● I-inflator yetayara enzima enegeyiji iza nento yokubamba irabha kwi-chuck enentloko ezimbini kwaye ibambelele kwisitayile.
● Isivalo esophayo somoya esahlukileyo sinqanda ukubhideka kokunyuka nokunyuka kwamanzi.
● Zombini iikhatriji zevalvu kunye negeyiji zinokutshintshwa.Ukutsalwa okuncinci, ukukhuhlana okuncitshisiweyo kunye ne-inertia encinci yokushukuma kuthetha ukuba akukho mhlwa wangaphakathi, akukho kuncamathela kwaye akukho kukrwada kokuchaneka.
I-Inflator yeTire eneGauge yokuDayela
• Umsebenzi – Gxumeka, Nciphisa kwaye ulinganise
• Isiguquli-moya seTire esinegeyiji yokudayela sinezixhobo zokugada irabha ukukhusela ekuthotyweni nasekunkqonkqozeni
• Iqhosha le-inflator elisebenza ngubhontsi omkhulu kunye neqhosha lokopha kwe-deflator elula
• I-inflator yeTire enegeyiji yokudayela inemilinganiselo emininzi: PSI, Bar, Kpa
• Isilinganisi-moya seTire esinegeyiji yokudayela ene-12” yombhobho werabha oguquguqukayo
IGauji yoxinzelelo lweTire enzima
● Igeyiji yoxinzelelo lwelori yelori enzima yakhiwe nge-2 intshi / 50mm yegeji yokudayela kunye ne-11 intshi / 230mm eyandisiweyo yentloko ezimbini ezithe tye emoyeni.
● Ichuck yesondo entloko ezimbini (ukutyhala) yenza umlinganiselo ube lula xa isiqu sevalve yetayara simi ngendlela eyahlukileyo, amatayara angaphakathi nangaphandle amatayara elinye nambini.I-air chuck yetayara ejikelezayo inokufakwa kwiimoto ezininzi, ngakumbi kwiilori, iitreyila kunye nee-RVs.Undoqo wevalve yenziwe ngobhedu oluqinileyo, olukwaziyo ukumelana nomhlwa kwaye lula ukwenza itywina ngesiqu sevalvu.
● Igeyiji yokuchaneka egqwethekileyo neyomeleleyo ikhuselwe sisigqubuthelo serabha sokumelana nokothuka nokubamba okukhulu.
● Umgangatho wokulinganisa uxinzelelo lwetayara ulinganiswe ukuba ube +/- 2% ukuchaneka koxinzelelo olupheleleyo lwetayara.
● Uxinzelelo oluphezulu lweepounds ze-160 nge-intshi yesikwere / ibha ye-11 kunye nokunyuka kwe-2 psi / 0.2 bar.
● Akukho mfuneko yeebhetri kunye nokugcinwa okuphantsi, umgangatho wokulinganisa uxinzelelo lwesondo kulula ukuyisebenzisa kwaye unokwethenjelwa kuzo zonke iimeko zemozulu.Ukwakhiwa koomatshini okuhlala ixesha elide kuyenza ifake isicelo semoto, iveni, ilori encinci, kodwa, ilori, iSUV, itrektara kunye nemoto enzima njl.njl.
● Ukwakhiwa kwevalve ye-air bleeder yenzelwe ukuthotywa kwetayara kunye nokusetha ngokutsha kwegeyiji emva komlinganiselo woxinzelelo lwetayara.
Umgangatho woMgangatho woxinzelelo lweTire
● Umgangatho wokulinganisa uxinzelelo lwetayara ubonisa intsimbi kunye nokwakhiwa kobhedu kunye ne-chuck stem eyandisiweyo.I-360 degree swivel football foot foot chuck ijikeleza ngokupheleleyo kwaye yenza ukuba igeyiji ifikelele nakweyiphi na indawo yevalve yamatayara ukuze ufumane itywina eligqibeleleyo ngaphandle kokuvuza komoya.
● Igeyiji yokuchaneka enqabileyo kunye neyomelele igqunywe ngumkhuseli werabha ukunika ukuxhathisa ukothuka okungcono kunye nokubamba okukhulu.
● Umgangatho wokulinganisa uxinzelelo lwesondo ulinganiswe kwi-+/- 2% ukuchaneka koxinzelelo olupheleleyo lwamavili, ohambelana nomgangatho we-ANSI B40.1 kunye ne-EN12645: i-2014.
● Uluhlu lwe-gauge luhamba ukuya kwi-100 psi okanye i-7 bar kunye nokunyuka kwe-2 psi okanye i-0.2 bar.
● Akukho mfuneko yeebhetri kunye nokugcinwa okuphantsi, umgangatho wokulinganisa uxinzelelo lwesondo kulula ukuyisebenzisa kwaye unokwethenjelwa kuzo zonke iimeko zemozulu.Ukwakhiwa koomatshini okuhlala ixesha elide kuyenza ifake isicelo semoto, isithuthuthu, iveni, ilori ekhaphukhaphu, iSUV, iRV kunye neATV njl.njl.
● Ubungakanani bokudityaniswa kwe-1.5 intshi / 38mm ukudayela kwenza iyunithi igcine ngokucocekileyo kwikhompatimenti yeglavu, ikhonsoli esembindini okanye ibhokisi yesixhobo, kwaye iluncedo kumadoda nabasetyhini.
● Umsebenzi wokubamba uxinzelelo, emva kokufunda umqhubi kufuneka akhulule umoya ngaphakathi kwegeyiji ngokucinezela ivalve yokopha umoya.Ivalve ye-air bleeder ikwayeyokucofa umoya kwamatayara.
Umpu weTire weInflator enegeyiji, ulwelo olugcweleyo
● Igeyiji ye-analog ezaliswe lulwelo ibonelela ngemilinganiselo yokuchaneka okuphezulu.
● Umpu wethayara lokuvuthela umoya onegeyiji uqulethe ivalve eyakhelwe ngaphakathi yokukhupha uxinzelelo lwetayara ukuthoba uxinzelelo lwakho ukuya kwinqanaba olifunayo kunye nokunciphisa uxinzelelo lwamatayara avuthe kakhulu.
● Umpu wethayara lomlilo onegeyiji ubonisa umbhobho oguquguqukayo ophezulu kwaye ubandakanya i-clip-on air chuck ukwenzela ukuba kube lula, iintlobo ezininzi zee-chucks ezikhoyo.
● 1/4 intshi ye-NPT / i-BSP efanelekileyo
● I-oyile izaliswe imilinganiselo yokulinganisa uxinzelelo kwi-PSI (0-230) kunye neBar (0-16)
● umpu wethayara lomlilo onegeyiji uqinisekise ukuba uxinzelelo lomoya olululo luchanekileyo kumatayara akho ngokunyuka kwe-1/2 lb kunye ne-2%.
● Ulwelo lufunxa ukungcangcazela/uxinzelelo lwezikhewu, lunciphisa ukuguga, kwaye lungcono kwiindawo ezinomhlwa.
● Iigeyiji ezizaliswe ngeoyile zinevalve yokuphuma komoya kumphezulu wegeyiji ekuvumela ukuba ulungelelanise ngokupheleleyo uxinzelelo lwangaphakathi nolwangaphandle, iqinisekisa ukuchaneka.
ITire inflator Gun ngeGauge
● Uluhlu lomlinganiselo wompu wethayara lomlilo onegeyiji: 0 – 170PSI okanye 0 -12 Bar
● Umpu wokufaka umoya kwitayara onegeyiji yeempawu zemilinganiselo kwi-PSI neBar.
● Iyahambelana ne-¼” yemveliso yomoya ye-NPT yecompressor
● Umsebenzi ovavanyiweyo kunye nokulinganisa ngokuchanekileyo kwi-2% uluhlu olupheleleyo lwesikali kunye nesisombululo sokubonisa se-0.2PSI ngokuchaneka okuphezulu.
● Ukwakhiwa komgangatho ophezulu, intsimbi enzima kunye nezixhobo zobhedu, umpu we-inflator wamatayara kunye negeyiji ubonelela ngokusebenza okungapheliyo;Ukusetyenziswa kwazo zonke izithuthi, ezifana nemoto, iSUV, ilori, isithuthuthu, ibhayisekile (enevalve yeSchrader) njl.
● Igeyiji ekhuselwe ngesihlangu serabha.